Mission & Vision - Prairie State Zvepamutemo Services
Basa rePrairie State Legal Services nderekuona kuwanikwa kwakaringana kweruramisiro uye kubatwa zvakanaka pasi pemutemo nekupa kuraira kwezvemitemo uye kumiririra, kutsigira, dzidzo, nekusvikira zvinoshanda kuchengetedza zvinodiwa nevanhu nekusimbisa kana kuchengetedza kodzero.
Prairie State inofungidzira nharaunda umo vanhu vese vanotambira mari shoma, vakwegura uye vanotambura vane mukana wekugadzirira rubatsiro kumutemo kuzadzisa zvido zvavo zvekutanga uye kune wese munhu anoziva, anonzwisisa uye anogona kushandisa kodzero dzavo uye kubatwa zvakaenzana mukutsvaga kwavo kururamisira.
7 maawa apfuura
Yemahara Virtual Zvemutemo Mharidzo TOMORROW! Illinois vakuru varidzi vedzimba (uye nyanzvi dzinoshanda nevaridzi vedzimba), dzidza kana reverse regeji yakakunakira iwe. Joinha Prairie State nyanzvi dzezvemitemo neChipiri, Chivabvu 18, kubva 3:00 kusvika 4:15 pm, kuti uwane muongororwo wekutanga weakawandisa regeji mibvunzo uye zvinonetsa, zvinosanganisira: • Ndiani anokodzera uye kuti zvinoshanda sei • Zvakanakira uye zvinokanganisa • Kudzivirira kudzoreredza regeji kubvutwa Ndezvipi zvakasiyana panguva yedambudziko re COVID-19 Bhalisa, apa: register.gotowebinar.com/register/840314270114339851	... Ona ZvimweOna Zvishoma